Boosaaso: Ciidamada Puntland oo fashiliyay weerar Qaraxyo ah +(SAWIRRO) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Boosaaso: Ciidamada Puntland oo fashiliyay weerar Qaraxyo ah +(SAWIRRO)
Boosaaso (Halqaran.com) – Howlgal ay ciidanka maamulka Puntland ka sameeyeen gudaha magaalada Boosaaso ayaa waxay ku soo qabteen qaraxyo kala duwan oo lagu diyaarinayay guryo ku yaal magaalada, si shacabka loogu dhibaateeyo.
Qaraxyadan ay ciidamada PSF-ta Puntland fashiliyeen ayaa ka koobnaa qaraxyada dhulka la geliyo iyo suumanka qaraxa ee naftood haligayaashu isku qarxiyaan.
Hawlgalkan ay ciidamada PSF-ta Puntland galabta fuliyeen ayaa daba socday hawlgalkii sagaalkii bishan ay ciidanka PSF-ta ka sameeyeen Boosaaso oo lagu diley xubin muhiim ah ka tirsanaa Daacish.
Sidoo kale waxaa lagu soo qabtay madaxii Amniyaatka Ururka Daacish ee gobolka Bari iyo 2 gaari oo qaraxyo lagu soo xiray.
Ciidamada PSF-ta Puntland ayaa waxay kaloo ay hawlgalkan galabta ku soo qabteen 3 maxbuus oo ku eedeysan inay ka tirsan yihiin Daacish.